RFID wristband, NFC zvigadzirwa, PVC Kadhi, Metal kadhi - Chuangxinji Factory.
13.56mhz ISO14443A Kupinda Kudzora ABS RFID NFC ...
Customized kudhinda Plastic PVC kuvimbika chipo makadhi
Yakagadzirirwa Plastic PVC NFC kadhi-MIFARE Ultralig...
Nharembozha isina waya IOS Android pos terminal nfc rf...
Microchip Tiny mini pasimbi NFC Chinamira FPC NF...
Pabasa Chengetedzo rfid patrol anti-simbi nfc tag
Chinamira cheRFID chisina chinhu pasimbi yeNFC coin Tag
Chinamira chakaoma chePVC PET RFID pasimbi ntag2...
Chengetedzo Ntag213 rfid patrol anti-metal coin ku...
Diki diki fpc ntag213 pasimbi mini dia10mm n ...
Yakavambwa mugore ra2001, Shenzhen Chuangxinji smart card co., Ltd yaive nyanzvi mukugadzira.
uye kushambadzira kwePVC kadhi, RFID kadhi, NFC bracelet uye RFID Tag nezvimwe.
Iine matatu emazuva ano uye akakwira mwero wekugadzira mutsara:
PVC kadhi kugadzira tambo ine pamwedzi inobuda 20,000,000 zvidimbu makadhi: Brand-mitsva CTP michina uye mhando Heidelberg offset kudhinda michina, 8 compating michina.
Antenna tambo yekugadzira ine pamwedzi inobuda ye20,000,000 zvidimbu makadhi: roll to roll to roll printing machines, compounding machines, machines for erosion and engraving.
RFID yekupedzisira chigadzirwa chekugadzira mutsara nemwedzi unoburitsa zviuru mazana mashanu ezviuru emakadhi akangwara uye mazana matatu ezviuru eRFID tag: akadzoserwa kuunganidza michina inoumba michina yekucheka kufa, michina yekucheka.
Isu tine 6 vashandi vekushambadzira vanotaura Chirungu, Germany, France, Spanish, Arabic uye zvichingodaro, bhizinesi redu rinobva kuEurope, America, Oceania, Africa, Asia uye nyika dzepakati kumabvazuva nematunhu.
RFID mhuka ear tag mhinduro
Metro RFID Kadhi Kubudirira Nyaya
Qatar Airlines plastiki pvc Luggage Tag
RFID kuwacha ma tag anowachwa
Idzi ndedzimwe nhau dzichangoburwa kubva kukambani yedu. Tichagadziridza dzimwe nhau dzekambani, zvinyorwa zvemaindasitiri, uye zvinyorwa-zvinocheka-kumucheto mune ino module nguva nenguva ... Isu tinofara kugovera aya mapoka newe, tinovimba unoifarira.
Nekudaro, iyo iripo chaiyo mamiriro emutengo wakakwira uye yakaderera kushanda zvakanaka mudura rekubatanidza, kuburikidza nekuferefeta o...
Sezvatinoziva tese, kushandiswa kweRFID muindasitiri yezvipfeko kwave kwakajairika, uye kunogona kuunza zvakakosha ...
RFID ruzivo rwekutanga
1. Chii chinonzi RFID? RFID ndiyo chidimbu cheRadio Frequency Identification, kureva, radio frequency identification....
Musiyano uye kubatana pakati peRFID inoshanda uye inongoita
1. Tsanangudzo Active rfid, inozivikanwawo se inoshanda rfid, simba rayo rekushanda rinopiwa zvachose nemukati batt ...